मन्त्रीलाई सिंहदरवारमै दुई बोतल रक्सी उपहार ! | Ratopati
मन्त्रीलाई सिंहदरवारमै दुई बोतल रक्सी उपहार !
काठमाडौं– ‘पावर ब्रोकर’ देखि कुटनीतिक नियोगसम्मले दशैंमा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिलाई उपहार टक्र्याउँछन् । तर, उपहार के हुन्छ र कहाँ दिइन्छ भन्ने प्रायः गोप्य नै हुन्छ । तर, यसपटक अनौठो भएको छ ।
केपी ओली सरकारका मन्त्रीलाई सिंहदरवारमै रक्सी उपहार दिइएको छ । तपाईंलाई यो समाचार अनौठो लाग्न सक्छ । तर, अनौठो नमान्नुस्, मन्त्रीहरुले कसरी रक्सी उपहार पाए, हामी जस्ताको त्यस्तै बताउँदैछौँ ।
केहि दिन अगाडि चिनियाँ र भारतीय दूतावासका निलो प्लेटका गाडी मन्त्रीलाई उपहार दिने रक्सीका बोतल बोकेर सिंहदरवार पसे । तर, ती गाडी अलग–अलग समयमा सिंहदरबार पसेका थिए ।
दुवै दूतावासका कर्मचारीले मन्त्रीहरुको सचिवालय–सचिवालय पुगेर दशैँको शुभकामना सहितको स्टीकर टाँसेको रक्सी उपहार दिएर फर्केका छन् ।
‘हामीलाई चिनियाँ र भारतीय दूतावासको तर्फबाट रक्सीका उपहार आएका थिए । पछि बुझ्दै जाँदा सबै मन्त्रीकहाँ पुगेका रहेछन्,’ एक मन्त्रीका नीजि सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘दिउँसै सिंहदरवारमा रक्सीका बोतल उपहार ल्याएर के सन्देश दिन खोजेका हुन्, केही बुझिएन । कम्तीमा क्वार्टरमा पुर्याएको भए पनि गोपनियता त बच्थ्यो । मन्त्रीज्यूको नीजि सचिवालयको टेबलमा मन्त्रीज्यूको उपहार भनेर छाडेर हिँडे ।’
हामीले ओली सरकारका ६ मन्त्रीका सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा सबैले रक्सी उपहार आएको पुष्टी गरे । र, उनीहरुले आफ्नो, मन्त्री र मन्त्रालयको नाम भने उल्लेख नगर्न आग्रह गरे ।
चीनको उपहार ‘ग्रिन लेवल’, भारतको ‘चिवास’
‘ह्याप्पी दशै–२०७५’ को स्टीकर टाँसेर मन्त्रीकहाँ रक्सी उपहार पुगेको थियो । यस्तो उपहार पाउने अर्का एक मन्त्रीका नीजि सचिवले चिनियाँ दूतावासले ‘ग्रिन लेवल’ र भारतीय दूतावासले ‘चिवास टुवेल इयर्स’ रक्सीको बोतल पठाएको बताए ।
अपमान भएको मन्त्रीको भनाई
भारतीय दूतावासले सस्तो रक्सी पठाएर मन्त्रीहरुको अपमान गरेको मन्त्रीहरुबीच छलफल समेत भएको छ । ‘अनौपचारिक कुराकानीमा मन्त्रीहरुवीच भारतले रक्सीमा पनि अपमान गरेको छलफल नै भयो ।’ अर्को मन्त्रीका नीजि सचिवले सुनाए, ‘भारतले सस्तो रक्सी दिएको मन्त्रीज्यूहरुलाई मन परेको छैन ।’
कति मुल्य छ उपहार आएको रक्सीको ?
चिनियाँ दुतावासबाट मन्त्रीलाई दिएको ‘ग्रिन लेबल’ एक लिटरवाला बोतल रक्सीको मुल्य आठ हजार छ । त्यसै गरी भारतीय दुतावासले दिएको ‘‘चिवास टुवेल इयर्स’ रक्सीको एक बोतलको मूल्य पनि झन्डै उस्तै पर्न आउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गुठी विधेयकबारे आकस्मिक निर्णय लिने संकेत
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नयाँ प्रविधि भित्रियो, यसरी गर्नेछ प्रविधिले काम
मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्यसहित १७ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
राजपा र सरकारबीचको संवाद ठप्प, संविधान संशोधन अन्योलमा
बझाङ जीप दुर्घटना: मृतक सबैको सनाखत